ကလေးမွေးခြင်းကို အားပေရန် မြို့အစိုးရဌာနခွဲအသီးသီးမှ သတ်မှတ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့မှုအထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစပြီးကလေး
တစ်ယောက်ဖွါးလျှင် ဆုငွေအဖြစ် ယွမ်း ၂ သောင်းထုတ်ပေး ၍ ၅ နှစ်အောက် ကလေး အတွက် တစ်လစီ ၂၅ဝဝယွမ် ထောက်ပံ့ကြေးကို ထုတ်ပေးသည်။ ထို့ပြင် အခြား ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးစုံဖြင့် နုပျိုသောလင်မယား၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချစေသည်။ ထိုင်ပေမြို့အစိုးရသည် ပြည်သူ့ရေးရာ၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ကျန်းမာရေး
စသောအရင်းအမြစ်နှင့် ပူပေါင်း၍နုပျိုသော လင်မယား ကို ကူညီထောက်ပံ့ ကြသည်။
လျှောက်ထားစဉ် မွေးဖွားသည့်နေ့မတိုင်မှီ ကလေးမိဘများ ဤမြို့တွင်တစ်နှစ် ဆက်တိုက်အိမ်ထောင်စုစာရင်းရှိရမည်။မွေးဖွားပြီးရက်60တွင်းအိမ်ထောင်စုစာရင်းရုံးတွင် မွေးဖွားမှတ်ပုံတင်ရမည်။ရက်လွန်ယူဆပါက စွန့်လွှတ်ရမည်။
လျှောက်ထားသူသည် မှတ်ပုံတင်ကဒ်နှင့်စာတိုက်(သို့)ဘဏ်စာရင်းမိတ္ထူဖြင့်လျှောက်ထား နိင်သည်။ကိုယ်စားလျှောက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့်လွှဲအပ်သူမှတ်ပုံတင်ကဒ် ပူးတွဲစစ်ဆေးမည်။
※ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း :1999 # 6269
1. မိဘကလေးနှစ်ဦးစလုံး (မွေးကင်စမှလွှဲ) ထိုင်ပေမြို့တွင် နေထိုင်သည်မှာ ၁နှစ်ပြည့်သည့် (ကလေး၁နှစ် မပြည့်သေးသည့် မွေးဖွားမှတ်ပုံတင်(သို့) အိမ်ထောင်စု ၁နှစ်ပြည့်) အခွန်အာဏာပိုင်များ၏ လတ်တလောနှစ်တွင် ၂၀%ထက်လျော့နည်းပြီး အစိုးရထောက်ပံ့ကြေး(သို့) ပြည်သူ့ရန်ပုံငွေ မရရှိသူ။
2. အသင့်လျှောက်လွှာပုံစံ(မိဘနှစ်ဦးလုံးအတူတကွ လက်မှတ်ထိုးရန်) အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အဖ(သို့) အမိ စာတိုက်(သို့) ဖုပန်းဘဏ်စာအုပ် မိတ္တူကို စာတိုက်(သို့) ကိုယ်တိုင် ခရိုင်လူမှုရေးရုံးသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
1. 2018စာသင်နှစ်မှစ၍ ကျောင်းနေ4နှစ်အရွယ် ပုဂ္ဂလိကမူကြိုကျောင်းတက်သူနှင့် မိဘတစ်ဖက်(သို့) အုပ်ထိန်းသူ အဆိုပါ စာသင်နှစ်အဆုံးတိုင်အောင် ဤမြို့တွင် အိမ်ထောင်စုရှိရမည်။လတ်တလောနှစ် အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေခွန်20%ထက်လျော့နည်း ရမည်။စာသင်နှစ်တိုင်းထောက်ပံ့ငွေ 13,660လျှောက်ထားနိုင်သည်။
2. ထိုင်ပေမြို့တွင်နေထိုင်သည့်5နှစ်အောက်ကလေးကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း：အစိုးရ မူကြိုကျောင်းတက်သူ၊ စာသင်နှစ်တိုင်း 5,543ထောက်ပံ့ငွေ（တစ်ရက်လုံးတန်း）(သို့) 3,235（နေ့ဝက်တန်း）ပုဂ္ဂလိကမူကြိုကျောင်းတက်သူသည် မိသားစု ဝင်ငွေခွန် ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားသည်။စာသင်နှစ်တိုင်းထောက်ပံ့ငွေ2,543မှ12,543မတူပါ။ဤမြို့ မူကြိုကျောင်းတက်သူများ မူကြိုကျောင်းမှတဆင့် မိဘများလျှောက်ထား နိုင်သည်။ပြင်ပမြို့နယ်ခရိုင်၏ကလေးများ လျှောက်ထားကာလအတွင်း အစိုးရပညာရေး ဦးစီးဌာနမှလျှောက်ထား နိုင်သည်။
※ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း：1999 # 1245、1088
မူလတန်း၊ မူကြိုကျောင်းဆင်းပြီး နောက်
1. ထိုင်ပေတစ်မြို့လုံးမူလတန်း142ကျောင်းနှင့်အစိုးရမူကြို149ကျောင်း၊ မိဘများ တောင်းဆိုပါက「ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်စောင့်ရှောက်မှုအတန်း」မူလတန်းည7နာရီ၊ အစိုးရမူကြို6နာရီ30ထိဖွင့်မည်။
2. မိဘများမေးမြန်းလိုပါကမူလတန်းအပိုင်း 1999 # 1251；မူကြိုအပိုင်း1999 # 6383 သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်မှီ
နှင့် ဒေါင်းရောဂါ စစ်ဆေးမှုများ​
1、အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်မှီ စစ်ဆေးမှုများ
ထိုင်ပေမြို့ အိမ်ထောင်စုဝင် လက်ထပ်ပြီး ပထမ ကိုယ်ဝန်မဆောင်မှီခင်ပွန်း(သို့) ဇနီး；(သို့)အိမ်ထောင်ဖက်ဤမြို့အိမ်ထောင်စုဝင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား（လူတိုင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားထောက်ပံ့ငွေတစ်ကြိမ်လက်ခံမှုရှိသည်။）。
(1).အစောပိုင်းကိုယ်ဝန်အတွက်ဒေါင်းရောဂါစစ်ဆေးမှုများ：ထိုင်ပေမြို့ အိမ်ထောင်စုဝင် ကိုယ်ဝန်9-13ပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်(သို့)အိမ်ထောင်ဖက်ဤမြို့ အိမ်ထောင်စုဝင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားကိုယ်ဝန်ဆောင်。
(2).အလယ်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒေါင်းရောဂါစစ်ဆေးမှုများ：ထိုင်ပေမြို့ အိမ်ထောင်စုဝင် ကိုယ်ဝန်15~20ပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်(သို့)အိမ်ထောင်ဖက်ဤမြို့ အိမ်ထောင်စုဝင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားကိုယ်ဝန်ဆောင်。
မှတ်ပုံတင်နှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်များ ယူလာရမည်(ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား နေထိုင်ခွင့်ကဒ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ ယူဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။)အဆိုပါတိုက်ရိုက်အစီအစဉ် တစ်ခုချင်းစီအတွက် အထူး ပြင်ပလူနာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်သည်။စစ်ဆေးခြင်း အခကြေးငွေအားလုံး အခမဲ့ ခံစားနိုင်သည်။（မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် စမ်းသပ်ခ မပါဝင်ပါ），မလိုအပ်သော အပိုဆောင်း ကုန်ကျစရိတ် ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း။
※ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း：1999 # 1833
ရိုတာဗိုင်းရပ် ကာကွယ်ဆေးထိုး ထောက်ပံ့ငွေ​
(1)ထောက်ပံ့ငွေသတ်မှတ်သည့် ရည်ရွယ်သူ：မွေးဖွားပြီ6းမှ 32ပတ်တွင်း၊ ထိုင်ပေမြို့ ကလေးများဆေးဝါးကူညီမှုလက်မှတ်ရရှိသည့်ကလေး 1、3 အမျိုးအစား ရရှိမည်။
(2)အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့သည့် ရည်ရွယ်သူ：မွေးဖွားပြီ6းမှ 32ပတ်တွင်း၊ ထိုင်ပေမြို့ ကလေးများဆေးဝါးကူညီိမှုလက်မှတ်ရရှိသည့်ကလေး2အမျိုး အစား ရရှိမည်။
2、 ထောက်ပံ့ငွေစရိတ်နှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးချိန်
ကာကွယ်ဆေး ထောက်ပံ့ငွေ အရေအတွက် ကာကွယ်ဆေး တစ်ခုချင်း ကုန်ကျစရိတ် ထောက်ပံ့ငွေ ကာကွယ်ဆေး ထိုးချိန် အကြံပြုကာကွယ်ဆေး အစောဆုံး ပထမအကြိမ် အသက်အရွယ် အတိုဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုး ကြားကာလ ကာကွယ်ဆေး နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် အသက်အရွယ်
ထောက်ပံ့ငွေသတ်မှတ်သည့် ရည်ရွယ်သူ အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့သည့် ရည်ရွယ်သူ
(Rotarix)21,050 ကာကွယ်ဆေးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအခမဲ့ 2、4
လ 6ပတ် 4ပတ် 24ပတ်
(RotaTeq)3700 2、4、6
※ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း：23759800 # 1926、23754341
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် မိဘကလေးခန်းမ
1.လူမှုရေးရာဌာန၊ မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျင်းပသော ကစားစရာ စာကြည့်တိုက်၊ မိဘကလေးဂိမ်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။
2.မိဘကလေးခန်းမမှ မိဘနှင့်၆နှစ်အောက် ကလေးအတူတကွ ကစားရန်နေရာ ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ လက်ရှိ မိဘကလေးခန်းမ ၁၃ခုနှင့် မွေးကင်းစကလေးကုန်စည်လဲလှယ်စင်တာ ၁ခုရှိသည်။
လူမှုဖူလုံရေး နေ့ကလေးထိန်းထောက်ပံ့ငွေအပြင် ထိုင်ပေမြို့ အပိုဆောင်းငွေ 2,000ယွမ်~4,000ယွမ်((စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်နှင့်မွေးကင်စကလေးကွာခြားမှု နှုန်း၊ ထောက်ပံ့ငွေပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည်။))。
သတင်းအပိုသိရှိလျှင် ထိုင်ပေမြို့ အစိုးရ လူမှုဌာနခွဲ ဝက်ဘဆိုက် သို့ သွားကြည့်ပါ--(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့မှု)